Nke a bụ afọ na-atọ ụtọ na teknụzụ ịntanetị. Ọ bụrụ na i lee ya site na ele ụkwụ ụkwụ 10,000, ụmụ mmadụ ka na-enwusi ike n'okporo ụzọ esi eji usoro ọhụụ a, Intanet. Ikekwe o doro anya mana m kwenyere na 2008 bụ n'ezie afọ ngwa na usoro na-aga Micro.
Email agafewo ihe eji eme ihe maka akwụkwọ akụkọ ma na-enwewanye ike na ụwa azụmahịa. Kama inye ya 'ihe omume' nke ozi email na-akpata ugbu a dị ka akụkụ nke usoro ịzụ ahịa ahịa zuru oke iji jigide ndị ọrụ ma mee ka ha jikọọ na ntanetị ahịa ha, netwọk mmekọrịta ha, blọọgụ ha gụrụ, wdg.
Lọ ọrụ amalitelarị iji Microblogging arụ ọrụ, mana anyị ga-ahụ maka ojiji nke Microblogging na 2008. Anyị ga-ahụkwa otu dị iche iche ka mma na Micro-ịde blọgụ… dị ka ebe nkata gbanwere na ngwa nkata ọha na eze afọ iri gara aga.
Ibe edokọbara dị ka Digg na-agbahapụ maka saịtị dị ka Mixx - ebe ị nwere ike ịtọ Micro Groups iji sonyere. M ga-agba onye ọ bụla gụrụ blog m ume ịkpọtụrụ m maka ịkpọ oku na Marketinglọ Ọrụ Ahịa N'ịntanetị ka anyị wee nwee ike ịkekọrịta njikọ. Ngwa ndị ọzọ dị ka Truemors ga-aga n'ihu na-eji ike ezubere iche nụchara anụcha karịa otu ahọpụtara.
Sọftụwia dị ka Ngwa Ọrụ ga-anọgide na-enwe nrụgide ka ọ nwee ike ịdị na-agbanwe agbanwe maka akara na ntinye n'ime ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ. Ọ dịghị ihe ọzọ bụ ngwa 'mkpọ' dị mma maka anyị ịzụta na itinye ya, anyị ga-ebugharị teknụzụ CSS iji gbanwee ngwa anyị na gburugburu ebe obibi. Anyị ga-arụrịrị ngwa ndị nwere ike ịmezigharị na obere obere (micro).
N’ebe ahụ ka inwere ya, amụma m maka afọ 2008 - afọ nke atụmatụ micro na ngwa azụmaahịa micro. Ike ike dị ka ndi otu, ihe ndi mmadu na-achoputa, ma obu ndi mmadu na-achikota ndi mmadu dika ndi mmadu.